के हो भिडियो एक्स-रे? किन र कसरी गरिन्छ?
मंगलवार २१ , पुष २०७७ Aadil Times 142
भिडियो एक्स-रे एउटा मेडिकल टेस्ट हो, जसले उच्च फ्रेक्वेन्सी को ध्वनि प्रयोग गरेर शारीर भित्रको अंगको प्रत्यक्ष तस्बिर निकाल्छ।यसले कुनै हानिकारक विकिरण निकल्दैन, त्यही भएर यो एकदमै सुरक्षित पनि छ। सुरक्षित भएकै कारण भिडियो एक्स-रे गर्भमा रहेकोबच्चा हेर्न पनि प्रयोग हुने गर्छ। भिडियो एक्स-रे जाँच छिटोछरितो, दुखाइरहित र अन्य रेडियोलोजी परीक्षणभन्दा सस्तो पनि हुन्छ।
मेडिकल छेत्रमा भिडियो एक्स-रेको प्रयोग हुन थालेको करिब ६ दशक भइसकेको छ। नेपालमा पनि यसको प्रयोग प्राय: सबै सानाठूलाअस्पतालमा हुन्छ।
भिडियो एक्स-रेबाट विभिन्न अंगहरुको जाँच गर्न मिल्छ। जस्तै: पेटको गर्दा कलेजो, पित्त थैली, फियो, मिर्गौला, पिसाब थैली, पाठेघर, डिम्ब, प्रोस्टेट अन्डकोष आदि। रगत नली, मांसपेसी, नशा, नवजात शिशुको मष्तिस्क आदि विशेष भिडियो एक्स-रेले जाँच गर्न सकिन्छ ।
एक्स-रे गर्भावस्थामा पनि विशेष प्रयोग हुनेगर्छ। पहिलो त्रैमासिकमा पाठेघरभित्र बच्चा बसेको वा नबसेको हेर्न, दोस्रो त्रैमासिकमा अंगराम्रोसँग बनेको वा नबनेको हेर्न र अन्त्यमा बच्चाको अवस्था, साल र पानीको अवस्था हेर्न भिडियो एक्स-रे गरिन्छ। यीमध्ये दोस्रोत्रैमासिकको जाँच सबैभन्दा जरुरी हुन्छ। यो बाहेक भिडियो एक्स-रेलाई बायोप्सी (मासु जाँच गर्न ) पेट तथा फोक्सोमा जमेको पानीनिकाल्न पनि प्रयोग गरिन्छ।
सामान्यतय: पेटको भिडियो एक्स-रे गर्न विशेषगरी पित्त थैलीको जाँच गर्न ४-६ घन्टा खाली पेट हुन आवश्यक छ। अन्य भागको भिडियोएक्स-रे गर्न खाली पेट जरुरी पर्दैन। प्रोस्टेट, पाठेघर, डिम्ब र पहिलो त्रैमासिकको गर्भ जाँच गर्दा पिसाब च्यापेको हुनुपर्छ। हात, खुट्टाकानशा या कुनै सुन्निएको भागको भिडियो एक्स-रे गर्न कुनै विशेष तयारी आवश्यक छैन।
कसरी गरिन्छ त?: यो जाँच गर्न ५-३० मिनेटसम्म लाग्न सक्छ, जुन के जाँच गर्ने हो त्यसमा भर पर्छ। जाँच गर्नु अगाडि जाँच गर्ने भागदेखाएर सजिलोसँग बेडमा बस्नु वा सुत्नु पर्छ र डाक्टरले जाँच गर्ने भागमा जेल लगाएर गर्छन्। जाँच सकिएपछि सफा कपडाले जेल पुछेरआफ्नो दैनिक कममा वा घर फर्किन सकिन्छ।
डा आबेश कोइराला